पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, यसपालि महामन्त्री उठ्छु : सहमहामन्त्री डा महत - Narayanionline.com Narayanionline.com पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, यसपालि महामन्त्री उठ्छु : सहमहामन्त्री डा महत - Narayanionline.com
काठमाडौँ, मङ्सिर १९-
उहाँसँग परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । आफ्नो पार्टी तथा सार्वजनिकरूपमा समसामयिक एवं राजनीतिक विचारहरू राख्नसक्ने स्पष्ट वक्ताका रूपमा डा महत परिचित हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गर्नुभएका डा महतसँग महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर राससले गरेको कुराकानीको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
हो, कतिपय प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन नसकेको पनि छ । भातृ सङ्गठन गठनदेखि अरू कतिपय विषयहरूमा यो अवस्था देखियो । तर मूल कुरा त पार्टी सभापतिजीले पार्टी एकतालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुभयो । पार्टीमा कुनै पनि खाले विग्रह र असन्तुष्टि नबढोस् भन्नेमा उहाँ बढी नै सजग रहनुभयो ।
अर्को कुरा उहाँले पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू सहमतिबाटै गर्ने कोसिस गर्नुभयो । ती निर्णयहरूमा पार्टीभित्र सर्वसम्मति हुन नसक्दा कतिपय निर्णयहरू समयमा हुन सकेनन् र यसका कारण कतिपय सङ्गठनात्मक काममा सुस्तता पनि आयो । पार्टीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत भए पनि बहुमतबाट नभएर सबै निर्णयहरू सहमतिबाटै गर्ने उहाँको नीति थियो ।
यसैले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्यो र पार्टी एकढिक्का भएर नै हामी महाधिवेशनमा जाँदैछौँ । यो नै पार्टी सभापतिको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हो भन्ने मैले ठहर गरेको छु । अब हिजो जेजस्तो भए पनि आसन्न महाधिवेशनपछि पार्टी चुस्त रुपमा सबै निर्वाचनहरुमा एक भएर जाने छ ।
प्रश्न– अहिले पनि पार्टी सभापतिमा दोहोरिएर शेरबहादुर देउवा नै उठ्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । आगामी कार्यकालमा पनि ती प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन्छन् भन्ने के सुनिश्चितता छ :
अवश्य पनि पार्टीलाई गतिशील बनाउने, पार्टीका सबै भातृ सङ्गठनहरूलाई गतिशील बनाउने, पार्टीमा देखिनसक्ने आन्तरिक विवादलाई व्यक्तिगत नभई संस्थागत गरेर लैजाने, पार्टीको रेकर्ड प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने, मूल्याङ्कन पद्दतिलाई वैज्ञानिक बनाउने, सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरेर पार्टीका क्रियाकलापहरूको प्रचारलाई चुस्त बनाउने, हामीले गरेका कामलाई जनताका बीचमा पु¥याउनेजस्ता कार्यहरू गर्नु जरुरी छ र यो सबै गर्न अब आउने कार्यकालमा गर्न सम्भव छ ।
त्यसका लागि अबको कार्यकालमा सभापतिजीसँगै जुन नयाँ टिम जान्छ त्यो टिमले सशक्तरूपमा काम गर्छ र पार्टीलाई एउटा गतिशील पार्टीका रूपमा रुपान्तरण गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ ।
भ्रातृ सङ्गठनका अधिवेशनहरू पनि सुुरुका दिनमा अघि बढेकै थिए । तर पनि मैले पहिले भनेजस्तै त्यसमा पनि पार्टीभित्र सबैको सहमति जुटाएर लैजानेभन्दा त्यसमा शिथिलता आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
यी कार्यमा पनि सभापतिजीले बहुमतको निर्णय गरेर अघि बढ्न चाहनुभएन तर सर्वसम्मति पनि जुट्न सकेन । जसका कारण यी कार्य पनि समयमै अघि बढ्न सकेनन् । जे होस्, अहिले पार्टी एक भएर निर्वाचनमा जाँदैछ, यो पनि एक उपलब्धि नै हो । अहिले हामी महाधिवेशनमा जुटेका छौँ, यो महाधिवेशनले चयन गरेको नयाँ टिमले आगामी कार्यकालमा सशक्त र चुस्तरूपमा काम गर्नेछ र पार्टीलाई नयाँ र सशक्त स्वरुपमा रुपान्तरण गर्नेछ ।
पार्टीभित्रको यो उहाँको नीति देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । उहाँ कसले के भने भनेर त्यसको पछि–पछि लागेर प्रतिवाद गर्नेतिर कहिल्यै लाग्नुभएन । देशको राजनीति कतातिर गइराखेको छ त्यसको सुक्ष्म यकिन गर्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो त्यसैले त उहाँले अहिले देशको कार्यकारीका रूपमा नेतृत्व गर्न सफल हुनुभएको छ । जस्तै भन्नु न देशमा नेपाली कांग्रेसको बढी मत भए पनि सांसद सङ्ख्याका आधारले गर्दा कम्युनिष्टहरू सरकार निर्माणमा बलिया थिए । तपाईँले पनि सुन्नुभयो नि उनीहरू अब देशमा ५० वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्थे ।
तर उनीहरूले यही एउटै कार्यकालको भार पनि थेग्न नसकेर राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई बचाउन देउवा नै आउनुप¥यो । हामी त संसद्मा सानो थियौँ । तर पनि नेपाली जनताले त स्पष्टरूपमा कांग्रेसले नै देश हाँक्न सक्छ भन्ने खाँचो महसुस गरे नि । त्यसैले उहाँ नै सरकारको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुप¥यो । देशको संसद् बचाउन उहाँ नै अघि सर्नुप¥यो । उहाँमा पार्टीमा जस्तै देशमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पनि मिलाएर लान सक्ने, उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुने गरेकाले नै तपाईँले नेतृत्व गरिदिनुप¥यो भनेका हुन् ।
त्यसैले अब आउने निर्वाचनमा पनि पार्टीलाई जिताएर लैजान र पार्टीेभित्रका असन्तुष्टि र विग्रहलाई पराकाष्ठामा लैजान नदिनका लागि नेपाली कांग्रेसमा पनि अबका दिनमा उहाँजस्ता नेतृत्वको आवश्यक छ । उहाँले भनिरहनुभएको पनि छ, त्यतिबेला कम्युनिष्टहरू मिल्दा कांग्रेसले हार ब्यहोर्नुप¥यो, अब सभापति भएर पार्टीलाई ठूलो पार्टी बनाउँछु र अबका निर्वाचनमा जिताउँछु । यसका लागि पनि आउँदो अधिवेशनमा उहाँलाई नै जिताउनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस संसारकै एक उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक विचार भएको पार्टी हो । यसले देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा धेरै काम गरेको छ । तर तपाईँले देख्नुभएको छ नि कम्युनिष्टहरूले आफूहरूले मात्र काम गरेको जस्तो गरी प्रचार गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधान नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्माण भएको होइन ?
त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हाम्रा पार्टी सभापतिले नै पहिला स्थानीय र लगत्तै संसद्को निर्वाचन गराउनुभएको होइन ? यही संविधान र हामीले नै गरेको पछिल्लो निर्वाचनपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको होइन ? तर अहिले हेर्नोस् त कम्युनिष्टहरूले सबै आफैँले गरेजस्तो गरेर प्रचार गरेका छन् । वर्तमान संविधानमा महिला, मधेशी, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, जनजाति आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हामीले गरेको होइन ? यी त पछिल्ला एकाध उदाहरण मात्र दिएँ यहाँलाई । यसबाहेक हामीले गरेका धेरै काम छन् यो देश र नेपाली जनताका पक्षमा । तर तिनको हामीले प्रचार गरेका छैनौँ, तर कम्युनिष्टहरूले आफूले गरेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् ।
त्यसैले अब मैले भनेको छु कि पार्टीमा प्रचार संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु जरुरी देखियो । हामीले काम गरेकै छौँ, जनताले थाहा पाएकै छन् नि भन्यौँ हामीले । तर अहिले जमाना फेरियो, सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मा¥यो । त्यसैले अब हामीले पनि आफूले गरेका कामको प्रचारै गर्ने त होइन तर जनतालाई थाहा दिनुपर्ने अवस्था देखियो । म महामन्त्री भएपछि त्यो कामको प्रणाली बसाल्छु । यो प्रणालीलाई नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्म सञ्चार गर्नु जरुरी छ ।
मुलतः त्यो भ्रमण भारतको सत्तारुढ दलको आमन्त्रणमा नेपली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट भएको हो । मैले अघि नै भनेँ कि हिजोको अपरिपक्व र ढुलमुले नीतिले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई ‘ड्यामेज’ गरेकै हो । हामीले वैदेशिक सहायता लिने काममा होस् या विदेश नीति सञ्चालन गर्दा पनि अत्यन्तै परिपक्वता आवश्यक छ । हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थको केन्द्रभागमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटा देशलाई एक र अर्कोलाई अर्को मापदण्ड अपनाउनु हँुदैन । यस्तो भयो भने देशका लागि घातक हुन्छ ।